Editor mod - Sida loo Edit Files mod la mod Video Editor
> Resource > Video > Sida loo Edit mod Video Files
Su'aal: Waxaan lahaa fiidiyo JVC Everio HDD iyo qabsada sawiro ku kordhin file .mod. Waa maxay barnaamijka edit karaa noocan ah ee video files?
Waa hagaag, waxaan isticmaali kartaa Editor mod in astaysto a video cajiib ah mod aad u. Wondershare Video Editor waa sida an Editor fiican mod kuwaas oo si gaar ah loogu talagalay in lagu saxaa mod video files ka kaamirada digital.
Qaybta 1aad: Sida loo Edit mod File
Qeybta 2: Best Video ayeey Software bilowga ah in Edit File mod
Sida loo edit files mod Talaabo Talaabo
Download Wondershare mod ayeey Software, rakibi iyo waxa maamula, ka dibna raac tilmaan-tallaabo-ka-tallaabo ku saabsan sida loo edit files mod hoos ku qoran. Haddii aad tahay user Mac ah, u leexdo xagga Mac Video Editor caawimaad.
Free download mod Video Editor:
Tallaabo 1: Ku dar Videos mod
Si aad ku dari video mod, riix "Import" oo dooro files M4V aad rabto in aad wax ka bedel. Waxa kale oo aad soo jiitaa Dufcaddii iyo hoos u files awooddo si aad u User ee Album. Dhammaan files ee la soo bandhigi doonaa in thumbnails yar oo fudud ayaad ugu iyaga ku eegaan karo suuqa kala xaq u arkaysid iyo qaato snapshots ee goobaha video sida aad jeceshahay.
Talaabada 2: Edit iyo kor mod videos
Jiid videos mod in track video on Timeline ee 1: Basic video tafatir sida beddesha, dalagga, oo wuxuu qotomiyey video duwan, saturation iyo dhalaalka, iwm .; 2: In "Text" tab, ku dar qoraalka in videos in Text tab. Tallaabooyinka faahfaahsan yihiin: marka hore jiidi template qoraaleed u diray Timeline ka dibna laba jibaar guji Text on Timeline inay soo galaan hab qoraalka tafatirka, taas oo aad ku qor kartaa qoraalka, dooro font, midabka, qaabka iyo codsan saamaynta text in lagu daro qoraalka kartoon ah si aad videos; 3. In "Saamaynta" tab, waxaad ku dari kartaa qaar ka mid ah saamaynta video filter farshaxanka in lagu daro qaar ka mid ah dhadhan gaar ah si aad u movie. 4. Jadwalka ah, hal-riix in aan kala tagno video ama jiita iyo hoos u jar dhererka video.
Talaabada 3: wadaag video saxar ah in si kasta oo aad jeceshahay
Marka aad dhammaysay tafatirka, guji "Abuur" si ay wax soo saarka aad videos si kasta oo aad jeceshahay, Si uu uga badbaadiyo video M4V qaabab kale oo ku saabsan computer deegaanka, fadlan guji "Qaabka" iyo qaar ka mid ah goobaha sheeg lagama maarmaan ah. Haddii aad rabto in aad ka ciyaari video abuurka on iPod, iPhone, iPad, guji "Device", ka dibna soo qaado thumbnail ee qalabka aad. Waxa kale oo aad gali kartaa adiga oo videos in YouTube si toos ah u leh dad ka badan wadaagno video abuurka ama gubi laga badbadeley iyo videos in DVD cajalladaha.
Fiiri talaabo talaabo video hoos ku tutorial,
Talooyin : Wondershare video editor mod isku daraa tafatirka iyo diinta qalab file mod, ay taageerto inaad ka bedel iyo badalo mod aad video files ka kaamirada si uu wax kaga cuno on go ah. Waxaa intaa dheer, 50 + Saamaynta kala guurka kaa caawin doona inaad la abuuro dheeraad ah oo heer sare ah videos badan waad qiyaasi kartaa.
Fiiro gaar ah: haddii aad failure kala kulmaan marka dajiyaan aad files mod, fadlan badalo aad files mod la free video Converter hore. Sidaa daraadeed, aad badalo kartaa files mod ee fudud oo 3 tallaabo.
Qeybta 2: Best Video ayeey Software bilowga ah in Edit File mod (Video Tutorial)